Biography, ịkpa arụ na nchepụta mmekọrịta nke Albert Einstein | Netwọk Mgbasa Ozi
N’afọ 1879, amụrụ otu n’ime ndị kachasị mma sayensị n ’ụwa na Ulm. Ọ bụ ihe Albert Einstein. Na narị afọ nke iri na asaa Isaac Newton kọwara iwu na-achịkwa ngagharị nke ahụ na kpakpando. Nke a nyere aka mee ka physics nke ụwa na nke ụwa dị n'otu. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ịmara nnukwu akụkụ nke ndị ọrụ ntanetị niile ruo ụwa nke oge a. Na ngwụcha narị afọ nke XNUMX, e nwere ọtụtụ ihe ịtụnanya na physics nke ndị nkuzi Newton na-enweghị ike ịkọwa. Yabụ, Albert Einstein aghaghị imeri adịghị ike niile nke physics ka ọ mepụta usoro ọhụrụ: tiori mmekọrịta.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị akụkọ ndụ na ọrụ niile nke Albert Einstein na mkpa ọ dị tiori nke mmekọrita dị ka mmalite nke physics nke oge a.
1 Akụkọ banyere Albert Einstein
2 Ozizi banyere mmekọrịta
3 Ozizi Albert Einstein
Akụkọ banyere Albert Einstein
E wepụrụ ụdị nkọwa nkọwa nke Albert Einstein. Nke ahụ bụ, nkwupụta a kara akara na mmalite nke ịgba alụkwaghịm n'etiti ndị nkịtị na sayensị nke na-agawanye n’ihu na enweghị nghọta. Agbanyeghị, ma n'oge ndụ nke physicist ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị, a kwadoro ọtụtụ akụkụ nke ikwu na ha dị ịtụnanya ma bụrụ ndị a na-apụghị ịghọta aghọta n'oge ahụ. Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara Albert Einstein ji bụrụ otu n’ime ndị sayensị kachasị ama ama na akụkọ ihe mere eme niile nke sayensị.
Ihe kacha dị ịtụnanya banyere nchọta sayensị a bụ na echiche ya nile bu ihe anachoputa iche bu ezie. Otu n'ime ha bụ dịka ọmụmaatụ na oke ahụ na-abawanye ngwa ngwa. Agbanyeghị, ama ama a bụ nwa akwụkwọ ọjọọ na nwata. Dịka nwata, ọ bụ nwa dị jụụ ma na - echekwa naanị onwe ya ma nwee nwayọ nwayọ nwayọ. Mgbe o mere agadi, Einstein n’onwe ya sịrị na ọ dị nwayọ nwayọ nke aka ya nke okike nke usoro mmekọrịta. Nke ahụ bụ, dị ka ya si kwuo, ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite itinye nsogbu nke ohere na oge mgbe ha dị obere. N'ihi ọganihu ya nwayọ, ọ maliteghị ịjụ ajụjụ gbasara ohere ruo oge o mere agadi. Ajụjụ ndị a bụ mmalite nke tiori mmekọrịta.
Ugbua na 1894 ezinụlọ ya niile nwere nsogbu ego nke mere ka ha kwaga Milan. Einstein nọrọ na Munich iji nwee ike gụchaa ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ọ mụrụ ọtụtụ ụmụ aha ya bụ Hans Albert na Eduard, ndị amụrụ n'otu n'otu na 1904 na 1910. Ka oge na-aga, Einstein gbara nwunye ya alụkwaghịm ma lụọ nwa nwanne nna ya Elsa.
Ozizi banyere mmekọrịta
Ọrụ 5 ọha na eze na 1905. Otu n’ime ha ka iji nweta doctorate na Mahadum Zurich ma ndị fọdụrụ na 4 ga-emesị mee mgbanwe dị egwu n’ihe onyonyo sayensị na-enye n’elu ụwa. Ma ọ bụ na ọrụ ndị a na-enye nkọwa nkọwa na usoro mgbakọ na mwepụ nke Brownian motion. Ha nyekwara nkọwa maka mmetụta fotoelectric. Maka nke a, ọ dabere n'echiche bụ na ihe mebere ìhè n'otu n'otu. Na ihe ọmụmụ physics na-esonụ, a kpọrọ quanta a photon.
Ọrụ abụọ fọdụrụnụ bụ ndị tọrọ ntọala nke echiche banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Na tiori a, enwere nguzo di n’agbata ike nke ihe di nkpa na oke ya. Nke a bụ ama ama E = mc². Ebe ọ bụ na ọrụ ha na nyocha ha nwere nnukwu mbọ n’azụ ya, o mere ka ha nọrọ n’etiti ndị ọkachamara n’ihe ọmụmụ physics na Europe nile. E mesịa bụ mgbe ezigbo ọha na-erute Albert Einstein na ọ bụ ya Enyere ya Onyinye Nobel na Physics, nke ọ natara na 1921.
Ozizi banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-anwa ịkọwa ụfọdụ nsogbu na echiche nke mmeghari ahụ. Agbanyeghị, ka oge na-aga, mmalite nke echiche a abụrụla ntọala nke sayensị a na-ahụ anya. Ọ ghọwo isi okwu na-enyere aka igosi ịdị n'otu dị mkpa nke ihe na ume, ohere na oge, na nha anya n'etiti ike ndọda na nsonaazụ osooso na usoro.
Ozizi a nwere usoro dị iche iche abụọ. Nke mbụ a maara dị ka pụrụ iche tiori nke relativity na-emekọ ihe na ndị niile na usoro na -aga ikwu na ibe ya na-agba ọsọ mgbe niile. Onye nke ọzọ ka akpọrọ tiori gbasara izugbe na-ahụ maka ịkọwa ndị ahụ usoro na-agagharị na ọsọ ọsọ. Ọ bụ na nke a agbanwe ọsọ ebe osooso na ẹkenam.
Ozizi Albert Einstein
Amaara nke ọma na iwu gbasara physics chọrọ iwu nke nwere ike ijikọ nkọwa niile nke sistemụ abụọ site na ijigide anụ nke na-ejighị n'aka ugbu a. Maka nke a, ọrụ niile nke Albert Einstein lekwasịrị anya na ime ka usoro izugbe pụta ụwa. Isi postulate nke tiori a bụ na ike ndọda abụghị ike kama ọ bụ ubi nke ọnụnọ nke oke igwe na-aga n'ihu na-aga n'ihu.
Ka oge na-aga na 1919 aha ya zuru ụwa ọnụ, na-eme ka ọ mụbaa nzukọ iziga ozi ya gburugburu ụwa. Onyinyo ya dị ka otu n'ime ndị njem nke klas nke atọ nke ụgbọ okporo ígwè ghọkwara ihe a ma ama. Ọ bụ onye ama ama maka iji eriri violin na-aga ebe niile n'okpuru ogwe aka ya. Ihe ahụ bụ na otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya na-akpọ violin.
Mgbalị niile nke Albert Einstein n’afọ iri na-abịanụ lekwasịrị anya n’inweta njikọ mgbakọ na mwepụ n’etiti electromagnetism na ndọda ike ndọda. Ebumnuche Einstein bụ chọpụta iwu ndị mmadụ na-ekwukarị maka omume nke ihe niile dị na mbara igwe. O bukwa na o chere na onwere iwu kwuru agwa ndi mmadu nile, ma ha bu physics nke ala ma obu physics. A ghaghị ịkọwa omume ndị a n'otu usoro mmụta dị n'otu.
Ọkà mmụta sayensị a kwuru n'otu oge na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere uru na-agabiga, ebe usoro nha bara uru ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ nsonazụ nke nsogbu o nwere mgbe ọ hapụrụ Germany gaa United States n'ihi ịrị elu nke Hitler na 1933. Ugbua n'afọ ndị ikpeazụ nke ndụ ya iwe nke ịghara ịda mba na usoro nke ekpughere ụmụ mmadụ nzuzo nke omume nke ihe ndị ahụ mere ka ahụike ya ka njọ.
Mgbe ntiwapụ nke Nagasaki na Hiroshima kwụsịrị Agha Secondwa nke Abụọ, Einstein jikọrọ ndị sayensị niile iji gbochie iji bọmbụ eme ihe n'ọdịnihu wee kwuo ka e guzobe ọchịchị ụwa site na United Nations.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Albert Einstein.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Albert Einstein